Fianakaviana mitolona mitady izay hanampiana ireo Azerbaidjaney tafahitsoka ao amin’ny tanàna iray tratry ny fahirano ao Okraina · Global Voices teny Malagasy
Tratry ny fahirano nanomboka tamin'ny 3 Martsa i Mariupol
Voadika ny 26 Avrily 2022 5:39 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, русский, українська, English
Pikantsary avy amin'ny tatitra lahatsary an'ny France 24 avy ao Mariupol.
Navoaka voalohany teo amin'ny Chaikhana Media ity lahatsoratra ity. Dika iray nasiam-panovàna no naverina navoaka indray teto noho ny fifanarahana iray fiarahamiasa amin'ny votoaty.
Tamin'ny 23 Febroary 2022 no fotoana farany nahitan'i Lala Amiraslanova ny fianakaviany tao Okraina, iray andro mialohan'ny fanafihana nataon'i Rosia.
Lala, ny reniny, sy ny zandriny lahy niverina tao Baku, Azerbaijan, tamin'io andro io. Ny rainy sy ny zokiny lahimatoa kosa nijanona tao Mariupol, tanàna iray misy mponina eo ho eo amin'ny antsasa-tapitrisa eo, any atsimo-atsinanan'i Okraina.
Nandritra ny andro maromaro taorian'ny niantombohan'ny ady, tsy afaka nifandray tamin'ny anadahiny na ny rainy intsony i Lala.
“Tena ratsy ny toe-draharaha any. Ampahany iray ao amin'ny faritra monja no ahafahan-dray zareo mandray antso,” hoy izy, nampiany koa fa ny anadahiny 30 taona, Kamil Amiraslanov, nilaza fa nijanona tao anaty toerana iray fialofana ry zareo ary tsy misy sakafo.
“Lazainy fa rehefa nivoaka izy, zavatra mampihoron-koditra no atrehany : feno fatin'olona eraky ny làlana, feno rà, ary rava daholo ny manodidina. Simba ireo fiaranay anankiroa ary tsy fantatr'izy ireo raha mbola mijoro ny tranonay.”
Hatramin'ny 3 Martsa, tratry ny fahirano i Mariupol ary efa hatramin'ny andro maromaro izay ireo tafika Rosiana no nandaroka baomba ilay tanàna. Nandamoka ny fikasàna hamindra toerana ireo mponina, hatramin'ny 14 Martsa, daty iray izay nandaozan'ireo fiaran'olon-tsotra maherin'ny 160 ny tanàna nony farany.
Io no famoahana voalohany nahomby hatramin'ny nihodidinan'ireo miaramila Rosiana ny tanàna, araka ny filazan’ireo tomponandraikitra eo antoerana.
Vao haingana, nilaza ny Human Rights Watch fa voafandrika ao anaty “nofy ratsy mampangovitra sy mampitampify” ireo sivily tao an-tànana, tsy misy jiro ary “miaina anaty fandrahonana zera baomba rosiana tsy ankiato”.
“Nivoaka ilay anadahiko ary nahita sakafo, saingy tena sarotra izany. Mosarena ireo ankizy”, hoy i Lala.
Any Baku i Sabir Safarov, 31 taona ary mitady ny rahavaviny sy ny fianakaviany izay monina ao Mariupol. Tamin'ny 2 Martsa no fotoana farany nahenoany ny momba azy ireo, rehefa nilaza taminy izy ireo fa handeha hiafina ary mety tsy ho tratra antso. Nandritra ny andro maromaro izay, niezaka niantso an'ireo zaobaviny i Sabir saingy tsisy vokany izany.
Nilaza i Sabir fa niezaka hahazo ny fanampian'ny Minisitry ny Raharahambahiny sy ireo sampam-panjakana hafa izy sy ireo havany, saingy tokana ny valiny azo dia hoe : ny minisitera dia tsy manana vaovao mihitsy satria “misy zera baomba ao an-tanàna, tsy mivoaka ny olona ary miafina izy ireo.
.”Nanontany aho mikasika izay mitranga ao amin'ilay lalantsara. Nilaza izy ireo fa eo ampiandrasana izany, ary ireo ankolafy Rosiana sy Okraniana irery ihany no afaka manamarina izany,” hoy izy. “Rehefa nanontaniako ny isan'ireo Azerbaidjaney ao Mariupol, dia tsy nilaza na inona na inona no sady tsy nanao lisitra izy ireo.”
Tsy misy mahalala hoe teratany Azerbaijaney firy no monina ao an-tanàna, ary kely ny vaovao avy amin'ny governemanta ao Azerbaidjan mikasika ny ezaka hanampiana azy ireo. Nilaza ny Minisitry ny Raharahambahiny fa eo amin'ny 7.500 eo ireo teratany Azerbaidjaney nalefa any amin'ny firenena hatramin'izao ary delegasiona iray no nalefa mba hihaona amin'ireo teratany Azerbaidjaney izay lasa nandositra any Moldavie.
Ny mpisolovava mikasika ny Zon'olombelona, Emin Abbasov, milaza fa manana adidy hiaro ny zo sy tombontsoa an'ireo teratany Azerbaidjaney monina any ivelany ny governemanta ao Azerbaidjan.
“Tsara marihana fa manana fifanarahana maro eo amin'ny roa tonta sy fifandraisana ara-diplomatika amin'ireo ankolafy roa mpifanandrina i Azerbaidjan”. Mpikambana anatina fifanarahana maroafy ihany koa iarahany amin'ireo mpifanandrina ireo i Azerbaidjan” , hoy i Abbasov izay manamarika fa manome rariny an'i Azerbaidjan ireny fifanarahana ireny mba hitakiany ny handefasana ireo siviliny.
Na izany aza, ilay mpitondratenin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny nilaza teo amin'ny media Chai Khana fa tsy manam-baovao mihitsy mikasika ny famindràna an'ireo olona avy ao Mariupol.
Navela hiady samirery, namorona vondrona Whatsapp antsoina hoe “Mariupol-Odessa” ireo teratany Azerbaidjaney izay manana havana ao Mariupol, ary mamoaka vaovao mikasika ny havan'izy ireo tsy hita no sady mangataka torohevitra.
“Azafady indrindra, raha toa misy olona miresaka amin'ireo fianakaviany, iangavio izy ireo mba hanao ny lisitr'ireo Azerbaidjaney eo akaikiny eo lahy/vavy. Na koa, raha toa io olona io mahita iray hafa eo amin'ny lisitra eny am-pilaharana sakafo na eny an-dàlana. Araka izany, mba ampitampitao eto ity vaovao ity”, hoy ny vakin'ny hafatra iray.
Mirkhalid Akhmadov, 23 taona, monina ao Baku ary mampiasa ny vondrona Whatsapp hitadiavana ny dadatoany sy ireo zanaky ny iray tampo amin'ny ray aman-dreniny. Niresaka tamin'izy ireo farany izy tamin'ny 1 Martsa, raha toa ka niafina tany ambanin'ny tany izy ireo noho ireo zera baomba.
Manampy ireo hafa ihany koa izy mba hahita ireo havany amin'ny alalan'ny famoahana ireo vaovao ao amin'ilay vondrona Whatsapp.
Nilaza i Mirkhalid fa efa 20 taona no nonina tao Mariupol ny dadatoany sy ny fianakaviany. “Tsy noeritreretinay mihitsy ny ho tonga amin'izao”, hoy ny nambarany. “Ankehitriny, tsy misy afaka mifandray na amin'iza na amin'iza mihitsy ao Mariupol, tsy misy mahafantatra na inona na inona”.
Raha mila fanazavana fanampiny mikasika ity lohahevitra ity, jereo ny fandrakofanay manokana ny Fananiham-bohitra ataon'i Rosia amin'i Okraina.